बजार सरसफाई र फराकिलो पार्ने गरियो : उपमेयर मल्ल - Paschimnepal.com
बजार सरसफाई र फराकिलो पार्ने गरियो : उपमेयर मल्ल
नारायण नगरपालिका दैलेखले अहिले साँगुरो दैलेख बजारलाई फराकिलो पार्ने काम गरिरहेको छ । न्यायिक समितिमार्फत विभिन्न मुद्दाहरुको फैसला र सुनुवाई हुने क्रम चलिरहेको छ । नगरपालिकाले गरेका कामकार्वाहीबारे समसामयक विविध विषयमा नारायण नगरपालिका दैलेखका उपमेयर सवित्री मल्लसंग गरिएकाे कुराकानीको सम्पादित अंश :-
१. निर्वाचित भईसकेपछि अहिले नगरपालिकाले कस्ता कार्यहरु गरेको छ ?
–नारायण नगरपालिकाले दैनिक कार्यहरु गरिरहेको छ । त्यसको अलवा हामी जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित भईसकेपछि नगरभित्रको मुख्य बजार चौडा पार्ने कामहरु गरेका छौं । नितिगत रुपमा सवै वडाहरुमा नयाँ देखीने खालका विकास योजनाहरु बनाएका छौं । नगरको सरसफाई अभियान चलाएका छौ ।
धेरै ठुलो विवादका विच सवै स्थानीहरुलाई अभियानमा सरिक बनाई सडक चौडा बनाउने काममा सफल भएका छौं । बजारका घुम्ती, सामानहरु हटाउने अभियान सकेका छौं । सडक सानो हुँदा जामको समस्या थियो । नगरपालिकाले सडक नै अवरुद्ध हुने सामान राख्ने, अटेर गर्नेलाई डोजर प्रयोग हटायो ।
बजारभित्रका पोल तथा तारवारहरुलाई हटाउनका लागि मैले सर्वदलिय बैठकमा प्रस्ताव राखेर निर्णय गर्न लगाएको छु । छिटै काम सुरु हुनेछ । काम गर्नेक्रममा थुप्रै सुझावहरु आएका छन् । महत्व हेरेर काम गर्नेछौं । नगरभित्र सरकारी जग्गा तथा घरहरुले विक्रिएको सुन्दरता फेरी ल्याउन बालमन्दिर लगायतका भवनहरु हटाउने कार्य नारायण नगरपालिकाले निर्णय गरेको छ ।
मुख्यतया ः सरसफाई, बजार खुल्ला गराउने अभियानमा केन्द्रित छौं । म त सुरुवात सुरुवात आफैबाट गर्ने भन्छु । मेरो उद्घोषलाई आफ्नै टोलबाट गणेशचौक मन्दिर वरपरका घुम्तीहरु सुचना टाँस गरि फाल्ने काम भयो । सार्वजनिक शौचालय लगायतका कहाँ बनाउने भनेर जग्गा हेरिरहेका छौं । अहिले चक्रपथ गुरुयोजना परिषद्बाटै अघि सारेको छौं । सवृद्ध नगरपालिका बनाउने अभियान सवै लागेकाले सवैबाट सहयोग पाईरहेको छौं ।
२. नारायण नगर पालिका बस्ती विकास गर्ने योजनामा किन मौन छ ?
–बस्ती विकासको योजनामा नारायण गराउन पालिका मौन हुनुका कारण सार्वजनिक अभाव, अर्को समस्या बजारको पुरानो २०५४ को निति कार्यक्रम सञ्चालन हुनु हो । सार्वजनिक जग्गा भयो भने बजारिकरण गर्ने योजनामा छौं । विगतमा गठन भएको नगर विकास समितिले माखो मारेन् ।
समिति गठन मात्रै भो काम भएन् । त्यो समितिले अलिकति पनि काम गरेको भए अहिले धेरै सजिलो हुने थियो । हामीले अव बस्ती विकासको योजना गरेर सवै नगरपालिकाभित्र सुविधा सम्पन्नसंग बसाउने योजना गराउने छौं । अव, नयाँ ठाँउको पहिचान गरि बस्ती विकासका योजनाहरु ल्याउने छौं ।
हाटबजार लगायतका हुने ठाँउहरु परिचान गर्ने क्रममा छौं । त्यसपछि हातबजार नगरभित्र चल्नेछ । जग्गाहरु हेर्ने कहाँ बसाल्दा राम्रो हुन्छ जनतालाई कहाँ बसाल्दा सुविधा हुन्छ त्यो हेरेका छौं ।
३. निर्वाचित भएर काम गर्दा जनताको ईच्छा आकान्छा कस्ता हुदा रैछन् ?
–सवै अधिकार पाउने छन् । सवैको सोच बढी नै हुन्छ । श्रोत कम छ । सवैले मागेको पुराउन कठिन छ यद्यपी सवैलाई चित्त बुझाउनै पर्छ । नगरपालिकामा आउने सवै सेवाग्राहीहरुप्रति नमनपूर्वक ब्यवहार गर्छु ।
अहिले १८ मन्त्रालयका कामहरु नगरपालिकाले गर्नुपर्छ । सवै काम जनताले एकै ठाँउबाट पाउँछन् । उहाँहरुले यो काम तपाई नै गर्नुपर्छ भनेर आउनु हुन्छ । विकासका बजेटदेखी न्यायीक समितिका काम समेत गरेकाले जनताहरु खुसी हुनुहुन्छ ।
माग मात्रै हाईन् काम पनि हुदोरैछ भन्ने आभास भएको छ जनतालाई । घरको भन्दा जनता नगरको माया बढी लाग्छ । म कार्यालयको कामपछि जनताकै घरमा हुन्छु एकदमै खुसी छु ।
४. न्यायिक समितिको संयोजक हुनुहुन्छ कस्तो समस्या आउने गरेका छन् जटिलका कस्ता छन् ?
–अहिले ३ जनाको न्यायिक समिति छ । समितिले पीडितका मुद्दाहरु हेर्ने काम गरेका छौं कति मुद्दा फैसला पनि गरेका छौं । फैसला निकै चुनौतीपूर्ण नै हुन्छ ।
फैसला गर्दा धेरै सोच विचार गरि ध्यान पुराउनुपर्छ । मुद्दाका कामहरु थुप्रै गरेका छन् । १८ महिना अघिका मुद्दाहरु पनि न्यायिक समिति गठनपछि फैसला गरेका छौं । विशेषत अंश, डिभोसका मुद्दाहरु बढी आउने गरेको छन् । न्यायिक समितिले नै हेर्नुपर्छ भनेर आउने गरेका छन् ।
सवै अधिकार नदिएकाले कतिपय मुद्दा दर्ता गरेको छु । कति फैसला समेत गरेर मुद्दा किनारा लगाएका छौं । प्रदेश कानुन नबनेकाले न्यायिक समितिको अधिकार ओझेलमा परेको छ । ईजलास कक्ष बनेको छैन् । तत्काल ईजलास जरुरत छ । कानुन अभावले समस्या थपिएको छ । पारदर्शी हुनुपर्छ भनेर नै मुद्दा हेरिरहेका छौं ।
५. करप्रणाली असमानता हुनुका साथै भद्रगोल पनि छ कसरी काम गरिरहनु भएको छ ?
–अहिले म आफु नै राजश्य समितिको संयोजक छु त्यसैले विगतमा करप्रणालीमा भएको असमानता र भद्रगोल हटाउन नितिगत निर्णय गरेको छौं । अव नितिगत रुपमा करप्रणाली चल्ने छ ।
कस्लाई कतिकर लगाउने र कुन कुन लगाउन मिल्ने र नमिल्ने सवै छलफल गरेर निर्णय गरेका छौं । कस्लाई कति लगाउने नितिगत रुपमा गरेका छौं । प्रत्येक २ महिनामा बैठक बसेर आएका सुझावहरु छलफलमा लैजान्छौं । विगतमा करप्रणाली कस्तो छ खर्च कसरी गरिन्थ्यो सवै छानविन समेत हुनेछ ।
६. सेवाग्राहीले सरल स्वभाव, काम गर्ने सक्ने उपमेयर भनेर चिन्छन् कस्तो लाग्छ ?
–सुन्दा एक दममै खुसी लाग्छ । पहिला पनि २०५४ मा यहि नगरपालिकाको सदस्य हुँ । त्यती बेला काम गरेको छु । मेरो ब्यवहार सवैलाई एकनासले हेर्न गरेको छु । जनताको समस्या कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर लाग्छु ।
जनताले विश्वास गरेका छन् । मैले सवैलाई सम्मान गर्छु त्यसैले सवैले मलाई विश्वास गर्छन् । ५ वर्षसम्म जनताको काम गरेर जनताको माँझमा कसरी पुग्ने मात्रै ध्यान जाने गरेको छ । धेरै अधिकारहरु छन् त्यी अधिकार कसरी कायान्वय गरेर देखाउने भन्ने छ ।
मैले सार्वजनिक पदधारण गरेपछि कामहरु पारदर्शिता गरेर मात्रै लैजानेछु । हामीले गर्ने हरेक निर्णय सवैले पढ्न पाउने गरि पारदर्शिता हुनुपर्छ भनेर सुचना अधिकारीलाई पनि भनेको छु । मैले पाउने सुविधा टिएडिएदेखी आवाससम्म लिदैन् ।
७. योजनाहरु हेर्दा उपभोक्तामुखी बढी भयो भन्ने आरोप छ नी के हो ?
–यो हल्ला हो । हामीले नितिगत रुपमा निर्णय गरेका छौं थुप्रै टेन्डरमार्फत छन् । बाँकी साना नगर, वडा स्तरका छन् जो उपभोक्ता मार्फत काम गरेका छौं । ती उपभोक्ता समितिलाई हस्तक्षेप गरेको छैन् । स्वतन्त्र रुपमा काम गर्ने भनेर निर्देशन पनि दिएका छौं ।
पारदर्शी उपभोक्ता समिति हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाएको छु । काम राम्रो नभएमा ती उपभोक्ता समितिलाई कानुन बमोजिम निकासा रोक्नेसम्म नितिगत कानुनी उपचारका लागि लाग्नेछौं । ती योजनाहरु प्राविधिक सहित अनुगमन गरेर पब्लिक अडिट गरेर भुक्तानी दिने छौं ।
प्रकाशित मितिः बुधबार, पुस २६, २०७४ 9:12:45 PM
Prevडा. गोविन्द केसी बिना धरौटी तारेखमा रिहा,
Nextउपप्रमुख आफै अनुगमनमा